နားခိုရာ: One_Missed_Call Virus
တောင်တောင်အီအီ ဟိုဟိုဒီဒီ စိတ်ကူးတဲ့ရာ လေထဲတိုက်ဆောက်ရာ အိမ်မက် နန်းတော်လေးပေါ့ဗျာ ....
This isaworm from Myanmar Student. Not from SG, made at Yangon.
Myanmar has many Hackers and Programmers. That is example number two.
Happy birthday is my first virus. Haveanice day admin.
(C) 26 MARCH 2008, by O.X
အဲဒီ virus ၀င်ပြီးတဲ့စက်မှာ အထက်က စာသားတွေပါတဲ့ text file လေးတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တဲ့ စက်မှာတော့ One_Missed_Call_#9.txt ဆိုတဲ့ နံမည်နဲ့ဗျ။
သူက svchost.exe ဆိုတဲ့ file နဲ့ virus ကိုတင်ပုံရတယ်။ အဲဒီ file ကို system32 အောက်က restore အောက်ထဲမှာသွားသိမ်းထားတယ်။ မသိရင်တော့ system file လိုလိုဘာလိုလိုပေါ့။ သူ trigger လုပ်ပုံက blood window ဆိုပြီး screen က အနီရောင်တွေ ဖြစ်သွားပြီးချိန်မှာ task manager တို့ folder option တို့ မရတော့ဘူး။ လောလောဆယ်အထိ Anti-Virus program တွေ မသိသေးဘူး။
Text file လေးမှာပါတဲ့ စာသားတွေကို ဖတ်ပြီး တော်တော်စိတ်လေသွားတယ်။ သူများတွေ အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်အောင်လုပ်ရတာကို ရန်ကုန်က မြန်မာ programmer ကွ ဆိုပြီး တလွဲဆံပင်ကောင်း ဂုဏ်ယူနေပုံရတယ်။ Happy birthday virus တုန်းကလည်း လုပ်ငန်းတွေ ကွန်ပျူတာသုံးသူတွေ Windows တွေပျက်စီးသွားတို့ တော်တော် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာကို ပြန်သတိရမိသေးတယ်။
အားကျချင်ရင် စံထားချင်ရင် computer professional တွေ programmer တွေအများကြီးပါ။ Google ရေးခဲ့တဲ့လူတွေ၊ YouTube ကို ဖန်တီးသူတွေ ... လူသားတွေအကျိုးရှိအောင် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ဂုဏ်ယူကြစမ်းပါ စံထားကြစမ်းပါ အားကျကြစမ်းပါ။
Worm program လောက်လေးရေးပြီး လူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ဂုဏ်ယူနေရင်တော့ အဲဒီလိုလူမျိုးကို Myanmar computer professionals, programmer အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပယ်ထုတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် အရေးတောင် ယူသင့်တယ်။ ဇကောလောက်မှ စောက်မနက်တဲ့ အကောင်။
Posted by little moon at 12:16 PM
win zaw said...
အတွေးအခေါ်မှားနေတာတွေ ပြုပြင်ဖို့ ထက်
တိုးတက်တာမဟုတ်ပါဘူး ဆုတ်ယုတ်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
အိမ်ကစက်နဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်တော်တော်များများမှာ အဲ့ဒီ ဗိုင်းရပ်စ် တက်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလို အနီရောင်ကြီးတွေ ပေါ်လာတာမျိုးတော့ မဖြစ်ဘူး။ စက်က မတရားလေးနေတာလေးပဲ ဖြစ်တယ်။ CPU Usage ကြည့်လိုက်ရင် အမြဲတမ်း 100% ပြနေတယ်။ အစကတော့ မသိပါဘူး။ နောက်တော့မှ မသင်္ကာလို့ msconfig မှာ သွားကြည့်ပြီး autorun list မှာ ဘာရှိလဲသွားကြည့်တော့မှ တွေ့တယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခါတည်း manually delete လုပ်လိုက်တာပျက်သွားတယ်။ Folder Options တွေ ပျောက်သွားတာတော့ ဟုတ်တယ်။ အဲ့ဒါ အင်တာနက်မှာ လိုက်ရှာပြီး မနည်းပြန်ဖော်လိုက်ရတယ်။
ရှိပြီးသား ဗိုင်းရပ်(စ်)ပေါက်စကိုယူပြီး သူ့ဖာသာသူ ပြင်ထားတာနေပါလိမ့်မယ်... စောက်ရူး။
August 18, 2008 at 2:22 PM
အဲဒီ့ကနေပြီးတော့ ဒီ virus ကို download လုပ်ကြည့်ပါတယ်။
လုပ်လိုက်တာနဲ့ ကျနော့ရဲ့ AVG 8.0 Free Edition ဟာ ချက်ချင်းသတ်လိုက်ပါတယ်။ ပေါ်လာတဲ့ warning အရ ဒီကောင်က သူများရေးပြီးသား trojan ကို သူ့နာမည်တပ်ပြီးလိုက်ဖြန့်နေတာပဲ။
စောက်ပေါ။ စောက်ပေါမှ စောက်ပေါအစစ်။
ယုံကြည်တန်ဖိုးထားရာ ကျွမ်းကျင် မွေ့ပျော်ရာ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ တစိုက်မတ်မတ် မှန်မှန်လေး လျှောက်လှမ်းဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ဦးပါ
Arsenal - My Favorite Team
သင်္ကြန်မှာပုံမှန်လာနေတဲ့ လျှပ်စစ်မီးက နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ပြန်ပြီး ပျက်တော့တာပဲ .... ဒုံရင်းဒုံရင်းအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့
ကြီးလာလို့ မာမီလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒုက္ခပဲ ...
Euro 08 Champion - Spain
Pressure took Ana out...
Sharpie's early drop-out
Arsenal Squard Numbers - 2008
Ten commandments for translators
Turkey wins .... amazing
Oğuzhan Özyakup to Arsenal
ဟော်လန်ရဲ့ လက်ခုပ်ထဲက ပြင်သစ်နဲ့ အီတလီ
Aaron Ramsey to Arsenal
Ana, the champion
Good luck Ana !
No Euro2008 on Family TV5
Yes, it's really in communist China
ဧည့်သည် (since 4th Sep 2007)
Burnese Net အလုပ်သမားလေး
Under World 1, 2, 3
Too Fast Too Furious 4
Knowing - Nicolas Cage ရဲ့ဇာတ်ကား - လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၅၀က ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရေးထားခဲ့တဲ့ ဂဏန်းတွေကို အဓိပါယ်ဖော်ရင်း ကဘာကြီးအတွက် အန္တရယ်ဆိုးကြီးကို သိလိုက်ရတယ် ... ကြည့်လို့ကောင်းသားပဲ
Cane - Cuba-American မိသားစုတစ်ခုရဲ့ internal power play တွေ၊ ကြံစိုက်လုပ်ငန်း Rum ချက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို နောက်ခံပြုထားတဲ့ Drama Series တစ်ခု
other sites ...
View my page on Myanmar Blogger Society